Wuxuu Helay Boorsadiisii Kaga Luntay Cidhifka Koofureed “Antarctica” 53 Sanno Ka Hor – Heemaal News Network
Paul Grisham Oo ah nin Maraykan ah kana shaqaynaayey waaxda saadasha hawada ciidamada Maraykanka ayaa boorsadiisii ku lumiyey 1968-kii, cidhifka koofureed ee aduunka “South Pole” isaga oo u safray Antarctica bishii Oktoobar 1967-kii, si uu halkaas uga shaqeeyo.
Grisham shaqadiisu waxay ahayd in uu ku soo war galiyo cimilada xarun saynis iyo gegada diyaaradaha ee Rossøya, oo ku taal Badda Ross ee xeebta Victoria Land.
Kadib markii uu dhamaystay shaqadii waxaa uu ku noqday California oo dib uu ula midoobay qoyskiisii, lakiin waxaa ka maqnaa alaabtiisii hal shay oo muhiim u ahaa waana boorsadiisii jeebka.
Lakiin Paul Grisham waxaa uu sabtidii dib u helay boorasdiisii ka lunta 53 sanno, waxayna ku timid boostiisa. Maan rumaysan ayuu yidhi Paul Grisham oo warbaahinta la hadaly, isaga oo si dagan u hadlaya 91 jirkani.
Sida la sheegay kuma jirin wax lacag ahi, laakiin waxaa ku jiray, kaarka aqoonsiga ee ciidanka badda, liisanka darawlnimada, kaarka canshuurta.
Kuwii ka shaqeyn jiray saldhiga waxay isku magacaabeen «Ice Rats» (jiirka barafka) waxayna wakhtiga isku dhaafin jireen biirka iyo ciyaaraha turubka fiidkii, maxaa yeelay boorsadiisa waxaa sidoo kale ku jiray foojarro biir ah iyo rasiidhada abaalmarinta turub uu ku guuleystay.
Waqtigaas waxaa jiray dagaal qabow iyo xiriir aad uxun oo udhaxeeyay Midowgii Soofiyeeti iyo Mareykanka waxaana jiray cabsi dhab ah oo ku saabsan dagaal Nukliyeer ah oo dhexmara Mareykanka. Boorsada ayaa sidoo kale ku jirtay kaar ay ku qoran tahay tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan waxa la sameeyo haddii ay dhacdo weerar hub nukliyeer, bayooloji ama kiimiko ah.
Stacey Abrams. Oo Mar Kaliya Caan Noqotay, Waana Gabadha Furaha Guusha U Dhiibtay Biden